Agwaetiti Grik | Akụkọ Njem
Maria | | Getaways Europe, Greece
Gris bụ obodo nrọ. Paradaịs maka ndị hụrụ akụkọ ihe mere eme, nka na gastronomy na Mediterranean. Ọ nwere ọnụ ọgụgụ dị mma nke nkuku na-adọrọ mmasị ịchọpụta, n'agbanyeghị na ndị kachasị ewu ewu n'etiti ndị njem bụ Atens na Greek Islands.
Ma ọ bụ ezumike ezinụlọ, oge izu ụka ma ọ bụ naanị ịnụ ụtọ ịdị jụụ nke osimiri, Agwaetiti Greek bụ ebe magburu onwe ya ịga leta otu ugboro ma ọ bụ ọtụtụ oge. E kwuwerị, Agwaetiti Greek bụ otu n'ime akụ dị egwu nke mba a magburu onwe ya.
O yikarịrị ka ọ bụrụ na anyị echee banyere Agwaetiti Greek, nke mbụ onye ọ bụla na-abata n'uche bụ Santorini, njikọ zuru oke nke saịtị ihe ochie, oke osimiri na ọwụwa anyanwụ mara mma na Oké Osimiri Aegean.
O doro anya na ị hụla ihe karịrị otu ugboro akwụkwọ ozi ndị a na-ese na-acha ọcha na ụlọ ha dị iche na nke na-acha anụnụ anụnụ nke oké osimiri. Ọ bụ ezie na ụsọ mmiri dị iche iche, ọ bụghị ha kachasị mma na Gris, ọ bụ ezie na e nwere ihe maka ihe ụtọ niile: dịka ọmụmaatụ, Kamari nwere aja ojii ebe Red Beach na Kameni Beach nwere mmiri jupụtara na sọlfọ na sọlfọ.
Isi obodo Santorini bụ Fira. Fọdụ ebe kachasị mma ị ga-ahụ ebe a bụ Katidral Ọtọdọks, ebe a na-edebe ihe mgbe ochie, ebe ndebe ihe ochie nke Prehistory ma ọ bụ ụka nke mgbịrịgba atọ.
Ebe ọ bụ na ọtụtụ ihe a na-eme n'àgwàetiti ahụ na-eme ka agụụ na-agụ gị, ọ dịghị ihe dị mma karịa ịkwụsị na ụlọ oriri na ọ restaurantụ restaurantụ iji nwalee nri mpaghara dị ka ọkụkọ ma ọ bụ gyros, mousaka ma ọ bụ nri mmiri.
Ọ bụ nkwụsị kachasị ewu ewu maka ndị na-achọ ihe ọchị ma nweta aha ọma maka ikpokọta ụlọ ahịa kachasị mma na Greek Islands. Ọ bụrụ n’ịchọrọ oriri na nkwari, n’obere akụkụ a nke Cyclades ị ga-ahụ paradaịs gị.
Chora ma ọ bụ Mykonos Town bụ etiti na isi obodo agwaetiti ahụ. Nke a bụ ebe ọtụtụ ụlọ oriri na nkwari akụ, ụlọ ahịa na ụlọ nri dị, yabụ ikuku dị ezigbo mma, ọkachasị n'abalị. Na Chora Ogwe maka ihe ọ aụ drinkụ na-etinye uche na Little Venice na diski n'ụsọ osimiri nke dị na ndịda agwaetiti ahụ.
Agbanyeghị, ọ bara uru ịmara akụkụ dị jụụ nke obodo ahụ n'isi ụtụtụ, ma n'isi ụtụtụ ma ọ bụ na-alọghachi n'oge na-adịghị anya site na oriri. Enweghị ndị mmadụ n'okporo ámá ma ọ dị ka ebe dị iche, jupụtara jụụ.
Corfu, otu n'ime agwaetiti Gris kachasị mma, bụ ebe nzuzo Jason na Argonauts họọrọ mgbe ha zuru Ohi Ọma ahụ. Ka ọ dị ugbu a, isi obodo agwaetiti a bụ ebe jupụtara na amara na ụlọ nri dị iche iche, ụlọ ahịa na ọtụtụ ndụ abalị.
Obodo ahụ na-ekwusi ike na ikuku ziri ezi nke ebe ndị a na-eleta obere, nwere ụlọ ochie nwere ọmarịcha ihu ma na-achapụsị site n'oge ngwụcha na uwe ndị koro na mbara ihu. Mana o nwekwara mpaghara nwere ikuku karịa ebe ndị ahịa na ndị ọrụ aka na-akpọ gị ka ị zụta ihe ncheta dị ka ihe ncheta nke njem dị otu a pụrụ iche na Greek Islands.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » Getaways Europe » Greece » Agwaetiti Greek
Obodo 10 mara mma nke Spain meriri Instagram